श्रम नियमावली मस्यौदामा देखिएका कमजोरी र समाधान | गृहपृष्ठ
Home अर्थान्तर श्रम नियमावली मस्यौदामा देखिएका कमजोरी र समाधान
on: २२ मंसिर २०७४, शुक्रबार १३:१० अर्थान्तर
श्रम नियमावली मस्यौदामा देखिएका कमजोरी र समाधान
जीफोरएस सेक्युरिटी सर्भिस नेपाल प्रालि
महेश श्रेष्ठको जन्म २०२४ सालमा गोरखामा भएको हो । उनले २०४९ सालमा पुलचोक क्याम्पसबाट सिभिल इञ्जिनीयरिङमा स्नातक र २०५५ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । उनमा स्वदेशी र विदेशी विभिन्न सङ्घसंस्थामा रहेर काम गरेको अनुभव छ । उनले दक्षिण सुडानमा एक्सन अगेन्स्ट हङ्गर नामको संस्थामा कण्ट्री डाइरेक्टर भएर काम गरेका थिए । उनी २०६४ सालदेखि जीफोरएस सेक्युरिटिज सर्भिसेज नेपाल प्रालिमा राष्ट्रिय निर्देशक एवम् प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् ।
छुट्टै निजी सुरक्षा ऐनको आवश्यकता
अहिले श्रम नियमावली, २०७४ को मस्यौदामाथि सरोकारवाला निकायबीच छलफल चलिरहेको छ । छलफलमा नियमावलीमा शब्दगत, भाषागत र विषयगत रूपमा धेरै ठाउँमा त्रुटि रहेको देखाइएको छ । नियम कानून भनेको संवेदनशील विषय हो । कुनै ठाउँमा सानो गल्तीले पनि ठूलो दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ भन्ने विषय सरोकारवाला निकायले बुझ्नुपर्छ ।
यो मस्यौदा नियमावलीको नियम १८ को उपनियम (२) मा श्रमिक आपूर्तिकर्ताले प्रत्येक श्रमिकका लागि ३ महीनाको पारिश्रमिकबराबरको धरौटी रकम निवेदन साथ पेश गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधान अव्यावहारिक देखिन्छ । यो व्यवस्थाले थोरै पूँजीमा व्यवसाय गर्ने साना व्यवसायी र श्रम आपूर्ति गर्ने ठूला व्यवसायीबीच भेदभाव गरेको छ । अवैज्ञानिक तरीकाले गलत शङ्काको आधारमा यो व्यवस्था प्रस्तावित भएकाले यसमा संशोधन गर्नुपर्छ । यस्तो प्रावधानले बजारमा आवश्यक पर्ने प्रतिस्पर्धालाई समेत निरुत्साहित गरेको देखिन्छ । त्यसैले नियमावलीमा छलफल गर्ने निकायले अन्य देशमा यससम्बन्धी कस्तो व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयलाई पनि हेर्नुपर्ने थियो ।
मस्यौदामा एउटै कम्पनीले अर्को शाखा खोल्दा दस्तुर तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यसले साना व्यवसायी समस्यामा पर्ने भएकाले यसमा पनि विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतमा आउट सोर्सिङ कम्पनीले देशमा सामाजिक र आर्थिक विकासमा सहयोग गरेका उदाहरण प्रशस्त छन् । राजस्व तिर्ने सन्दर्भमा पनि देशलाई ठूलो सहयोग गरेको छ । त्यसैले यस्ता व्यवसायलाई सङ्कुचित गरिनुभन्दा पनि फराकिलो पार्नुपर्छ ।
सरकारले ऐन र नियमावली लागू गर्दा पूर्वतयारी गर्ने समय दिनुपर्छ । थोरै समय दिँदा तयारी हुन सक्दैन । नियमावली राम्ररी कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा १ वर्षको समय हुन आवश्यक छ । तर, नियमावली आउनुभन्दा अगाडि सरोकारवाला निकायमा विस्तृत छलफल हुन जरुरी छ । नियम कानून छलफलबाट आयो भने नै हामी सबैलाई राम्रो गर्छ । होइन भने नियमावली कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन्छ र व्यवसायीले आफूले गरेको काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिँदैन ।
सरकारले आउट सोर्सिङ कम्पनी र यन्य उत्पादनमूलक कम्पनीबीच भिन्नता कायम गरेको छ । आउट सोर्सिङ कम्पनीलाई जसरी विभिन्न व्यवस्था गरिएको छ अन्य कम्पनीलाई किन त्यो व्यवस्था गरिएन ? यसरी एकै देशमा एउटै उद्देश्य राखी सञ्चालन अनुमति पाएका कम्पनीबीच भेदभाव किन ?
उत्पादनमूलक उद्योग र सेवामूलक उद्योग सबैलाई एकै किसिमको नियम लागू गर्नुपर्छ । पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाले कसैलाई पनि राम्रो गर्दैन ।
अन्तरराष्ट्रिय जगतको अभ्यास हेर्ने हो भने निजी सुरक्षा निकायको छुट्टै ऐन रहेको पाइन्छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा त्यस्तो छैन । सरकारले निजी सुरक्षा निकायका लागि भनेर मात्रै छुट्टै ऐन ल्याउनुपर्छ । छुट्टै ऐनले निजी सुरक्षा निकायलाई फाइदा हुनुका साथै गुणस्तरमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा छुट्टै ऐन हुनाले निजी सुरक्षा संयन्त्रको महङ्खव बढेको र कार्य क्षमता पनि बढेको पाइन्छ । निजी सुरक्षा निकायलाई महङ्खवपूर्ण जिम्मेवारी जस्तैः कलाकारहरूको सुरक्षा, व्यवसायीको सुरक्षा, प्रतिष्ठित व्यक्तिको सुरक्षाजस्ता काममा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । त्यसैले पनि नेपालमा छुट्टै निजी सुरक्षा ऐनको आवश्यक भएको हो ।
श्रम नियमावली मस्यौदामा संशोधन गर्नुपर्ने विषय
रमेश दाहाल, पूर्वनिर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैङ्क
समयको गतिसँगै नेपालमा श्रम व्यवस्थापन गर्न श्रम ऐन, २०७४ जारी भयो । सो ऐनले प्रस्तुत गरेका प्रावधानहरूको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न कोणबाट बहस, छलफल र अभिमत प्रकट भइरहेका छन् । श्रम ऐनको पूरकका रूपमा हालै सरकारले श्रम नियमावली २०७४ को मस्यौदासमेत छलफलका लागि जारी गरेको छ । मस्यौदा नियमावलीमा विभिन्न सरोकारवालाको राय लिएर परिमार्जनसहित त्यसलाई स्वीकृत गराउन सरकारी निकाय लागेको छ । यो सहभागितामूलक नीति निर्माणको सुन्दर पक्ष हो ।
हाल प्रस्तावित अवस्थामा रहेको श्रम नियमावली, २०७४ ले श्रम व्यवस्थापनका विभिन्न पक्षमा निकै राम्रा प्रावधानहरू अघि सारेको छ । सो नियमावलीले श्रमिकका बिदा, सञ्चयकोष, उपदान, स्वास्थ्य उपचार, अवकाशजस्ता पेशागत क्षेत्रका साथै सेवा सुविधाका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ । रोजगारदाता र आउटसोर्सिङ कम्पनीको दायित्व, व्यवसायजन्य सुरक्षा, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था विदेशी श्रमिकका लागि श्रमस्वीकृतिको प्रावधान, महिला कर्मचारीको सुरक्षा, प्रसूति अवस्थाका सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा पनि नियमावलीले स्पष्ट धारणा पस्केको छ । निर्माण मजदूर र घरेलु श्रमिकजस्ता ओझेलमा परेका विषयलाई पनि नियमावलीले समेटेर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको मुद्दालाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएको छ । आफ्नै शब्दमा श्रमिक र रोजगारदाताबीचमा रहेर सरकारले जिम्मेवार नियामकको भूमिकालाई निर्वाह गर्दै श्रम नियमावलीलाई समयसापेक्ष, वस्तुपरक र यथार्थवादी बनाउने प्रचार गरेको छ । तर, नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न अवरोध खडा गर्ने हो कि भन्ने डर पनि उमारेको छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम कुनै विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा रोजगारदाताले कार्य स्थगन गरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ । यसरी श्रमिकलाई जगेडामा राख्दा खाइपाई आएको आधा पारिश्रमिक श्रमिकलाई दिनुपर्ने छ । साथै त्यस्ता श्रमिकले पारिश्रमिकबाहेक खाइपाई आएका अन्य सुविधा पनि पूरै पाउनेछन् भनी प्रस्तावित श्रम नियमावली, २०७४ मा उल्लेख गरिएको छ ।
यो प्रावधान लगानीमैत्री छैन । यसले औद्योगिक र व्यावसायिक क्षेत्रको लागत बढाउनेछ । बढ्दो लागतले स्वदेशी उत्पादन महँगो हुने, बजारमा अप्रतिस्पर्धी हुने एवम् आयात वृद्धि र निर्यात कटौती हुने प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखिनेछ, जुन समग्रमा आर्थिक विकासका लागि प्रतिकूल हो । त्यसैले श्रमिकलाई जगेडामा राख्नेसम्बन्धी हालको प्रावधानउपर बहुआयामिक कोणबाट थप छलफल गरी नयाँ विकल्पको खोजी गर्नु व्यावहारिक देखिन्छ ।
प्रस्तावित श्रम नियमावली, २०७४ ले महिला श्रमिकलाई बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म मात्र काममा लगाउनुपर्छ, रात्रिकालीन सिफ्टमा काम गराउनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले नेपलाको शहरीक्षेत्रमा खुलेका नाइट क्लब, डान्स रेष्टुराँ, बार, होटल मात्र होइन, सबै र चौबीसै घण्टा सञ्चालन हुने औद्योगिक प्रतिष्ठनका महिला श्रमिकको रोजगारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कार्यस्थलमा महिला श्रमिकउपर हुने अभद्र व्यवहार, शोषण र यौन हिंसालाई शून्यमा झार्नुपर्छ । यस विषयमा दुईमत हुन सक्दैन । तर, मुलुकले महिला श्रमिकलाई सम्मानजनक रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा उनीहरूको खाइपाई आएको रोजगारीमै आघात पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नु मनासिव देखिँदैन । अर्कातिर चौबीसै घण्टा चल्ने कतिपय उद्योगले रात्रिकालीन सिफ्टमा काम गर्ने महिलाहरूका लागि आवास, सुरक्षा प्रबन्धमा गरेको लगानी अनुत्पादक खर्चमा परिणत हुन जान्छ । यो लगानीमैत्री वातावरण विरोधी पक्ष हो । अतः यस बुँदामाथि पनि थप विश्लेषण गरी सही समाधानको उपाय खोज्नु युक्तिसङ्गत देखिन्छ ।
प्रस्तावित नियमावलीले अघि सारेको एउटा राम्रो पक्ष रोजगारदाता, श्रमिक र आउट सोर्सिङ कम्पनीबीचको सम्बन्धलाई दृष्टि दिनु पनि हो । उद्योग व्यवसायको लागत न्यून गर्न श्रमिकको आउटसोर्सिङ गर्नु स्वाभाविक हो । तर, नेपालमा आउटसोर्सिङ व्यवसायले श्रमिकको शोषण गरेको परिघटना बढी छन् । उद्यमी व्यवसायीले पर्याप्त रकम भुक्तानी गरे पनि आउट सोर्सिङ कम्पनीले अधिक नाफा खाई श्रमिकलाई न्यून ज्याला दिएको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न नियमावली सचेत भएको देखिँदैन ।
यी माथि उल्लिखित सन्दर्भ केही प्रतिनिधिमूलक हुन् । यसमा पुनरवलोकन हुनु आवश्यक छ । अन्य केही पक्षहरू, उदाहरणका लागि घरेलु कामदारको सेवा सुविधा, निर्माण क्षेत्रका श्रमिकको र कृषि श्रमिकको हकहित पक्ष, श्रमशक्तिको आपूर्तिमा सरकारको दायित्वजस्ता विषयमा प्रस्तावित नियमावलीले यथेष्ट प्रकाश पार्न सकेको छैन । श्रम व्यवस्थापनलाई सङ्गठित र युक्तिसङ्गत बनाउन मुख्यतया रोजगारदाता, सरकार, श्रम सङ्गठन, क्षेत्रगत विशेषज्ञ र अर्थविद्हरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले प्रस्तावित नियमावलीउपर सूक्ष्म व्यावहारिक नीतिगत बहसबाट सही निष्कर्षमा पुग्नु समयको माग हो ।
लेखक श्रम नियमावलीको मस्यौदाकार हुन् ।
‘छुट्टै प्राइभेट सेक्युरिटीऐन चाहिन्छ’
उद्धवराज डल्लाकोटी, अध्यक्ष, सुरक्षा व्यवसायी सङ्गठन नेपाल
श्रम नियमावलीको मस्यौदामा सुधार गर्नुपर्ने विषय केके देख्नुभएको छ र किन ?
श्रम नियमावलीको मस्यौदाको परिच्छेद ६ को नियम १८ को (२) मा निवेदनका साथमा काममा लगाउन चाहेको श्रमिक सङ्ख्याका आधारमा प्रत्येक श्रमिकका लागि ३ महीना बराबरको पारिश्रमिक धरौटी रकम नियमावलीबमोजिम राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै श्रम नियमावली मस्यौदामा आफूले काममा लगाएको श्रमिकप्रतिको दायित्व व्यक्तिगत रूपमा समेत वहन गर्ने कुरामा प्रत्येक सञ्चालकको लिखित प्रत्याभूतिसमेत हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ । प्रत्येक श्रमिकको ३ महिनाबराबरको पारिश्रमिक धरौटी सेक्युरिटी कम्पनीहरूले राख्न नसक्ने र पेशा व्यवसाय स्थापित नभई विस्थापित हुने भएकाले यो नियम न्यायोचित नभएको हुँदा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
तपाईंहरूको सङ्गठनका तर्फबाट श्रम नियमावलीमा संशोधन गर्न सुझाव दिने विषय कहाँ र कस्तो अवस्थामा पुगेको छ ?
हाम्रो सुरक्षा व्यवसायी सङ्गठन नेपालका तर्फबाट उक्त मस्यौदाको नियमावलीका सम्बन्धमा विषयगत रूपमा संशोधन गर्न श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसँग आवश्यक छलफल भइरहेको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला अन्य पक्षसँग पनि आवश्यक समन्वय गरी यस पेशा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन आवश्यक पहल गर्ने विषयमा सङ्गठन लागिरहेको छ ।
सुरक्षा गार्ड आपूर्तिकर्तालगायत आउट सोर्सिङ कम्पनीहरूले गरीब श्रमिकको पसिनाको कमाइ खाएर काम लगाएकाले अब आउने नियमावलीले नियन्त्रण प्रयास गरेको भन्ने भनाइ पनि छ नि ?
अन्य आउट सोर्सिङ कम्पनीभन्दा सुरक्षा सेवा उपलब्ध गराउने कम्पनीहरूको जोखीम बढी हुन्छ । यसमा केवल श्रमिक आपूर्ति गर्ने मात्र नभई २४सै घण्टा जोखीम वहन गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी रहेको हुन्छ । यसमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको जस्तै जिम्मेवारी, कर्तव्य, जवाफदेहिता हुने भएकाले यसलाई अतिसंवेदनशील पेशा मानिन्छ । अझ भन्नुपर्दा अरूको जोखीम सुरक्षा कम्पनीले खरीद गरेको भन्दा फरक पर्दैन । यहाँले भनेजस्तै कतिपय कम्पनीले श्रमिकलाई न्यून तलब, भत्तामा काम लगाएका पनि होलान् । यसमा सम्बन्धित पक्षबाट समेत अनुगमन व्यवस्थित गर्न गराउन आवश्यक छ । हाम्रो सङ्गठन पनि श्रमिकलाई न्यायोचित र राज्यले तोकेअनुसारको सेवासुविधा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै छ । यसमा ‘श्रममैत्री’ मात्रै नभनेर व्यवसायमैत्री, श्रमिकमैत्री र लगानीमैत्री वातावरण बनाउने ध्येय हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्र श्रमिक, उद्योगी, व्यापारी, लगानीकर्ता, मुख्य रोजगारदाता, रोजगारदातालाई फाइदा पुग्छ र राज्यलाई समेत शान्तिसुरक्षा स्थापना गर्न एवम् राजस्व आर्जन गर्नसमेत सहयोग पुग्छ । बेरोजगारी समस्या पनि न्यूनीकरण हुनेछ ।
तपाईंले सुझाव कसरी दिँदै हुनुहुन्छ र सुझाव कार्यान्वयन भएन भने के गर्नुहुन्छ ?
उद्योगविनाको श्रमिक र श्रमिकविनाको उद्योगको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले यो पेशा व्यवसायलाई मर्यादित बनाउन सरकारको नीतिनियममा रही उद्योगी, श्रमिक र सरकारलगायत सम्बद्ध पक्षको सहकार्यले सबै अट्ने किसिमको वातावरणमा अगाडि बढ्नु नै सबैका लागि हितकर हुनेछ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु । समन्वय र सहकार्य गर्न अधिकतम प्रयास गर्दागर्दै पनि व्यवसाय विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आइपरेमा हाम्रो सुरक्षा व्यवसायी सङ्गठन नेपाल बाध्य भएर न्यायका निम्ति कानूनी उपचारका लागि अगाडि बढ्नेछ ।
हाम्रो सङ्गठन श्रमिकविरोधी होइन । हामी आफै रोजगारदाता पनि श्रम गरी रहेका नै छौं । छिमेकी मुलुक भारत, श्रीलङ्कालगायत अधिकांश देशमा निजीस्तरबाट सञ्चालित सेक्युरिटी कम्पनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न गराउन सम्बन्धित देशको गृह मन्त्रालय मातहत रहने गरी प्राइभेट सेक्युरिटी ऐन प्रचलनमा रहेकाले नेपालमा पनि गृह मन्त्रालय मातहतमा रहने गरी यो व्यवसायलाई मर्यादित र पारदशी बनाउन हाम्रो सङ्गठनसमेतको रायसल्लाह र सुझावमा प्राइभेट सेक्युरिटी ऐन बनाई लागू गर्न सरकार र सम्बन्धित पक्षसँग माग गर्छु ।
विमल कँडेल, निर्देशक, फ्रक्स जब
श्रम नियमावली कस्तो आउँदै छ ? यस विषयमा छलफल कहाँ पुगेको छ ?
अहिले आउन लागेको श्रम नियमावली निजीक्षेत्रमा छलफलको क्रममा रहेको छ । छलफलपछाडि नै थाहा होला कस्तो आउँछ । नियमावलीका बारेमा अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । सबै निजीक्षेत्रबाट यसमा विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । ती प्रतिक्रियालाई समेटेर सबै पक्षलाई सहयोग हुने किसिमको श्रम नियमावली ल्याउनुपर्छ ।
श्रमिक आपूर्ति व्यवसायीले काम मिलाएबापत श्रमिकको कमिशन धेरै खाएको र श्रमिकले पाउने विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गराएको भन्ने आरोपलाई निराकरण गर्न नियमावली ल्याइएको भनिन्छ नि ?
पहिलो विषय श्रम आपूर्तिकर्ताले श्रमिकको पारिश्रमिकबाट कमिशन खाँदैनन् र खान पनि हुँदैन । रोजगारदाता र श्रमिक आपूर्तिकर्ताका बीचमा छुट्टै करार हुन्छ । अर्को विषय भनेको हामीजस्ता श्रमिक आपूर्तिकर्ताले जहिले पनि श्रमिककै हितका लागि नेपाल सरकारको श्रम ऐनअनुसारको सेवासुविधा दिनुपर्छ भनी आवाज उठाउँदै आएका छौं । हामीले रोजगारदातालाई श्रमिकले पाउने अधिकार र सुविधाका बारेमा जानकारी पनि गराउँदै आएका छौं ।
नियमावली मस्यौदामा तपाईंहरूको असहमति कुनकुन विषयमा हो ?
नियमावली मस्यौदा अलि फरक ढङ्गले आएको देखिन्छ । नियमावली श्रम ऐनभन्दा फरक तरीकाले परिभाषित गरिएको छ । कतिपय विषय ऐनमा स्पष्ट देखिन्छ भने नियमावली धेरै द्विविधा र कार्यान्वयनमा जटिलता ल्याउने खालको छ । बीमा धरौटी, श्रमिक आपूर्ति लाइसेन्स, श्रम आपूर्ति क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्थालगायतमा नियमावली अस्पष्ट छ ।
श्रम ऐन, २०७४ को दफा ५९ को उपदफा (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यमा एउटै कम्पनीले दुईभन्दा बढी काम वा सेवाका लागि श्रमिक आपूर्ति गर्न नपाउने व्यवस्थामा पनि तपाईंहरूको असहमति रहेको भन्ने सुनिन्छ ?
व्यवसायीलाई ‘सीमित कार्यक्षेत्रमा मात्र काम गर’ भन्नु घुमाउरो तरीकाले काम नगर भन्नु जस्तै हो । यसले व्यवसाय र यसको प्रक्रियाको गुणस्तरमा कमी आउलाजस्तो देखिन्छ । यो खुला बजार नीतिविपरीत पनि छ ।
श्रम नियमावलीको मस्यौदाको नियम १८ को उपनियम (२) मा प्रत्येक श्रमिकका लागि ३ महीनाको पारिश्रमिकबराबरको धरौटी रकम निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने प्रावधान श्रमिकको हितमै रहेको देखिन्छ । यसमा तपाईंहरूको असहमति किन ?
यो व्यवस्था अति नै अव्यावहारिक देखिन्छ । किनकि शुरूमै श्रमिकको सङ्ख्या निर्धारण गर्न पनि सकिँदैन र ३ महीनाको पारिश्रमिकबराबरको धरौटी रकम व्यवस्था गर्न अहिलेका श्रमिक आपूर्तिकर्तालाई असम्भव छ । विश्वमा कहीँ पनि यस्तो व्यवस्था भएको देखिँदैन र सुनिँदैन । यो नेपाली उखान ‘आम्दानी आठ आना खर्च रुपियाँ’ जस्तै लाग्छ ।